Education for Burma: March 2008
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ် နိမ့်ကျရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ သင်ရိုးတွေ ခေတ်မမီမှု၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ နိုင်ငံ့ရေးရာတွေမှာ ဘက်လိုက်သင်ကြားတာတွေနဲ့ အတူ သင်ရိုးကို အစိုးရက ဗဟိုကနေ မတရားသဖြင့် ချုပ်ကိုင်စွက်ဖက်မှုတွေကြောင့်လည်း နိမ့်ကျနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ ပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာက မိဘတွေရဲ့ အထွေထွေစီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေကြောင့် ကလေးတွေ ကျောင်းမနေနိုင်တာကြောင့်ရော၊ အစိုးရရဲ့ လျစ်လျူရှုမှုကြောင့် ပညာရေးစနစ်အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျနေ ရတာတွေကြောင့်ရော၊ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး ယိုယွင်းကျဆင်းနေချိန်မှာ အာဏာပိုင်အစိုးရ မကူညီဘဲနဲ့တော့ အောင်မြင်တဲ့ ပညာရေးကို ရဖို့ ခဲယဉ်းတာ အမှန်ပါပဲ။ တကယ်လို့ အစိုးရကသာ စေတနာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးကို အလျင်အမြန် ဦးမော့သွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ အစိုးရကသာ ပညာရေးကို လမ်းဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ခုလောက် ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့ ပညာရေးကို လည်း ပြန်ပြီး ဦးမော့လာအောင် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပညာရေးမှာ လူလတ် တန်းစားမိသားစုဝင်ကလေး တွေပါ တက်ရောက်သင်ယူနိုင်တဲ့ အခမဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျောင်းတွေ များများ ဖွင့်ပေး နိုင်ပါတယ်။ ပညာရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးမယ့် အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း NGO တွေကို ခွင့်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီအပြင် နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် လူထုကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကူညီတည်ထောင်တဲ့ အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းတွေ ဖွင့်သင့်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲလို အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမျိုးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလို နိုင်ငံကြီးမှာတောင် အမျိုးသားပညာရေး ဆောင်ရွက်ချက်အနေနဲ့ လုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာတော့ အဲလိုကျောင်းမျိုး ကို Charter School လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံက ချာတာကျောင်းပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းလေ့လာထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ပညာရေး ပညာရှင် ဒေါက်တာသိန်းလွင်ရဲ့ အမြင်ကို ဒီနေရာမှာ တင်ပြပါ့မယ်။
ချာတာကျောင်းတွေဟာ အစိုးရကျောင်းများကနေတဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား မိဘနှင့် ဆရာများပါဝင်သော နိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင် တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့ ကျောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ချာတာကျောင်းတွေဟာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကနေ ကင်းလွတ်ပြီးတော့ ကျောင်းသား တွေရဲ့ ပညာရေးအောင်မြင်မှုအပေါ်မှာသာ အခြေခံပြီး တည်ထောင်တဲ့ ကျောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ အောင်မြင်မှုများများရမှ ချာတာကျောင်းပညာရေးက တည်တံ့အောင်မြင်တဲ့ ပညာရေး ဖြစ်လာမှာပါ။ ချာတာကျောင်းပညာရေးမှာ ကျောင်းသားမိဘက ကျောင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေနဲ့ မတူတာကတော့ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေက ကျောင်းသားကို ရွေးလက်ခံပြီး ကျောင်းသားက ကျောင်းလခ ပေးရပါတယ်။ ချာတာကျောင်းတွေကတော့ အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ချာတာကျောင်းတွေကို ရီပတ်ဗလီကင်နှင့် ဒီမိုကရက်နှစ်ပါတီစလုံးက အားပေးပါတယ်။
သမ္မတ ဘီလ်ကလင်တန်လက်ထက်မှာတုန်းက ချာတာကျောင်းတွေဟာ လွတ်လပ်မှုလည်းရှိ၊ တာဝန်ယူမှု လည်း ရှိပြီး နိုင်ငံရေးအရလည်း အကျေအလည် ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အကယ်ဒမီကျောင်း (City Acedamics)တွေကလည်း အမေရိကန်က ချာတာကျောင်းတွေနဲ့တူတယ်လို့ ဒေါက်တာသိန်းလွင်က ပြောပါတယ်။ အကယ်ဒမီကျောင်း တွေကလည်း လွတ်လပ်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးတိုးတက်မှုကို ဆောင်ရွက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါက်တာသိန်းလွင်က အမေရိကန်ဆရာများသမဂ္ဂကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ချာတာကျောင်းများအပေါ် အမြင်ကို မေးမြန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဆရာများ သမဂ္ဂရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက ချာတာကျောင်းတွေရဲ့ အကျိုးနဲ့အပြစ်ကို ချိန်ထိုး ပြောပြပါတယ်။ ပြောပြချက်တွေအရ အားသာချက်ကတော့ ချာတာကျောင်းတွေရဲ့ အရွယ်အစားက အစိုးရကျောင်းတွေထက် သေးငယ်တာကြောင့် စီမံခန့်ခွဲရ လွယ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်၊ ကျောင်းသေးတဲ့အတွက် ကျောင်းသားလည်း နည်းတာမို့ ကျောင်းသားတွေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ အစိုးရ ကျောင်းတွေထက် ပိုပြီး နိုင်နိုင်နင်းနင်းရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နောက် ချာတာကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက် လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ထင်ထင်ရှားရှား ရှိပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်က ကျောင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် အချက်အချာ ကျတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ချာတာကျောင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကတော့ အစိုးရကျောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက် ဆရာတွေ အလုပ်မမြဲကြတာ ကြောင့် သင်ကြားရေးမှာ မတည်ငြိမ်ဖြစ်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ချာတာကျောင်းတွေဟာ အစိုးရကျောင်းတွေနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်လာ တာကြောင့် အစိုးရကျောင်းဆရာတွေ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ချာတာကျောင်းတွေဟာ လွတ်လပ်မှုလွန်ကဲပြီး ပညာရေးစံတွေနဲ့ ကင်းလွတ်တယ် လို့လည်း ဝေဖန်ပါတယ်။ ဆရာများသမဂ္ဂရဲ့ အမြင်အရတော့ ချာတာကျောင်းက ဆရာတွေဟာ 'ဆရာများ သမဂ္ဂ'ကို မ၀င်ကြတာကြောင့် ဆရာများသမဂ္ဂက ပို့ချတဲ့ သင်တန်းတွေ တက်မထားရပါဘူး၊ ဒါကြောင့် စံမီတဲ့ ဆရာတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ယူဆထား တာပါပဲ၊
ဒေါက်တာသိန်းလွင်ကတော့ ချာတာကျောင်းတွေရဲ့ အကျိုးအပြစ်ကို ချိန်ဆပြီး မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရာမှာ ချာတာကျောင်းပုံစံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ချာတာကျောင်းတွေ ဟာ ‘အစိုးရ ထောက်ပံ့ခံပေမဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ကျောင်း’တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲလို လွတ်လပ်တဲ့ ကျောင်းတွေကို အားပေးတာဟာ တနည်းအားဖြင့်တော့ ဆရာတွေ၊ ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ ပညာရေး လုပ်ဆောင်သူတွေကိုပါ ပညာရေးဖွံ့òဖိးရေးအတွက် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လာစေအောင် အားပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံသားအားလုံး တက်ကြွစွာပါဝင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့်ကို အားပေးခြင်းပဲ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက တွဲဘက်ကျောင်းတွေဟာလည်း ရပ်ရွာတွေကနေ တာဝန်ယူ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကျောင်းတွေ ဖြစ်တာမို့ လွတ်လပ်တဲ့ ကျောင်းတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာ ဒေါက်တာသိန်းလွင်က ပြောပါတယ်။ အဲသလိုပဲ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုလည်း ရပ်ရွာက ထောက်ပံ့ကူညီထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ချာတာကျောင်း ပညာရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်း အစိမ်းသက်သက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ရပ်မိရပ်ဖတွေ ကိုယ်တိုင် ကျောင်းတည်ထောင်နိုင်ရင်တော့ လွတ်လပ်တဲ့ ချာတာကျောင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဒေါက်တာသိန်းလွင် အကြံပြုထားတာကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by မေငြိမ်း at 7:13 PM No comments:
Posted by မေငြိမ်း at 8:58 PM No comments:
ဒီတပတ်မှာတော့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဦးသန့်ရဲ့ ပြည်ရေးပြည်ရာ Civic Education သင်ရိုးညွှန်းတန်းဆိုင်ရာ ပညာရေးဆောင်းပါးကို အပြီးသတ် ဆွေးနွေးတင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းပညာရေး ရဲ့ အထက်တန်းအဆင့်မှာ နိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဦးသန့်ရဲ့ အယူအဆကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေမှာတုန်းက တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဦးသန့်က အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေဟာ အသက်၁၅နှစ်ကျော်ပြီးဖြစ်တာမို့ ကျောင်းပညာရေးထဲမှာ နိုင်ငံရေးကိုထည့်ပြီး သင်ကြားပေးရတော့မယ်လို့ အကြံပြု ထားပါတယ်။ အဲလိုသင်ကြားပေးရာမှာလည်း ဘုရင်စနစ်၊ ကိုလိုနီစနစ်၊ အရင်းရှင်စနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေအထိ မျိုးစုံအောင် သင်ပေးရ ပါမယ်။ ဒါမှပဲ လူငယ်တွေဟာ သူတို့နှစ်သက်ရာ စနစ်တခုကို စဉ်းစားရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲသလို ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးသန့်ရဲ့ အယူအဆအရတော့ ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးကိုပဲ သင်သင်၊ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးပြစ်တွေကိုတော့ ချိန်ထိုးနှိုင်းယှဉ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝဥဿုံ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးရယ်လို့ မရှိနိုင်သေးပေမဲ့ အကောင်း ရှုထောင့် ပိုများတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုမှာ လက်ခံအသုံးပြုနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတောင်မှပဲ အကျိုးနဲ့ အပြစ် ကို ချိန်ထိုး ပြောပြပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်မှာသာ ရှိနေသေးတဲ့ ၁၉၄၀ကျော်ကာလဟာ ကမ္ဘာမှာတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ် အတန်သင့် ထွန်းကားနေပါပြီ်။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး၊ အားသာချက် အားနည်းချက် တွေကိုလည်း မြင်တွေ့ သုံးသပ်နိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန့်ကတော့ သူ့ရဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှာ ဥပမာပေးတဲ့ သင်ခန်းစာအဖြစ် ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကို ဆွေးနွေး ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျောင်းသား လူငယ်တွေ အနေနဲ့ သေသေချာချာ စဉ်းစား သုံးသပ်ရမယ့် နိုင်ငံ့အရေးအရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးသန့်ရဲ့ တင်ပြထားချက်ထဲက ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်တွေကို ပြောပြပါ့မယ်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အားသာချက် ကောင်းကျိုးတွေကတော့ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဟာ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့သူတွေသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူ့အလိုကျ သာ အုပ်ချုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုနဲ့ အုပ်ချုပ်သူကိုယ်စားလှယ်တွေက အမြဲ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ဆက်သွယ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံအတွင်း မကျေနပ်မှု ပုန်ကန်မှု တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပြည်သူကျေနပ်မှပဲ သူတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးက အောင်မြင်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဆိုရင် တရားဥပဒေကလည်း ပြည်သူလူထုက ကျေနပ်လက်ခံပြီး စနစ်တကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ တရားဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှပဲ ပြည်သူလူထုဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကို တရားသဖြင့် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခွင့်ရကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင် နိုင်ငံရေးကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာကြောင့် နိုင်ငံရေးအသိအမြင်နဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ ဉာဏ်ရည်တွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ နောက်ထပ်အားသာချက်ကတော့ ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်း တန်းတူအခွင့်အရေး ရနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကောင်းကျိုးတွေဟာ နိုင်ငံသားတွေ ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ လုံခြုံမှုပေးနိုင်တာမို့ နိုင်ငံအေးချမ်းသာယာရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေပါပဲ။
ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ အားနည်းချက်တွေရှိတာကိုလည်း ဦးသန့်က ထောက်ပြ ဆွေးနွေး ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရကို ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူအားလုံးတန်းတူ နိုင်ငံရေးအသိဉာဏ် ရှိဖို့ဆိုတာ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုဟာ အပြစ် အနာအဆာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာ ပါတီ ပုံသဏ္ဍန်အမျိုးမျိုး ရှိလာ နိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် အစိုးရဟာလည်း သက်တမ်းမရှည်တာမို့လို့ နိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေကို တဆက်တစပ်တည်း ဆောင်ရွက်ရ တာမျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်တချက်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ငွေအမြောက်အများ သုံးကြတာမို့လို့ နိုင်ငံစီးပွားရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေကတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေလို့ ဦးသန့်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်မြို့က ဘာဟော့ဖ်(Berghof)သုတေသနဌာနက ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ဒေးဗစ်ဘလွန်းဖီး (Dr.David Bloomfield) ကတော့ "ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရှာဖွေ ကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုးတွေထဲမှာတော့ အသက်သာဆုံးစနစ်တခုဖြစ်တယ်"လို့ သူ့ရဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေး (Reconciliation) ဆိုင်ရာ စာတန်းတစ်စောင်ထဲမှာ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ လောလောဆယ် ခု ၂၀၀၇ခုနှစ်ထိလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများစုဟာ လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အသုံးပြုနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မျက်မှောက်အနေအထားနဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ရုန်းထွက်တတ်ဖို့အတွက် တော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာ လေ့လာသင်ယူသင့်တဲ့၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီး ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်တရပ် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယား ကောင်းမွန်မှုဟာ အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ အရည်အသွေးပေါ်မူတည်သလို နိုင်ငံသားတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်ပညာ ကြွယ်ဝ ဖွံ့ဖြိုးမှု အပေါ်မှာလည်း အများကြီး မူတည်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နိုင်ငံသားတွေကို နိုင်ငံရေးအသိပညာပေးဖို့အတွက် စာသင်ခန်းတွေကနေ ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ Civic Education ဟာ ကိုယ့်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ရေးကို ဦးတည်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေဖြစ်ဖို့လိုတာမို့၊ Civic Education ထဲမှာ ဘာသာရေးသင်ခန်းစာတွေကိုပါ ထည့်သွင်း သင်ကြားသင့်တယ် လို့လည်း ဦးသန့်က ပြောထားပါတယ်။ လက်လှမ်းမီသမျှ ဘာသာရေးတွေကို ကျောင်းသားတိုင်း မဖြစ်မနေ သင်ယူကြရတဲ့အတွက်၊ စိတ်နှလုံး နူးညံ့သိမ်မွေ့ရေးနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကို အားပေးစေနိုင်ပြီး ဘာသာရေးတိုင်းကို လေးစား တတ်သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း စာသင်သားတွေကို ပဋိပက္ခစိတ်တွေ လျော့နည်းစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးသန့်ရဲ့ ပြည်ရေးပြည်ရာဘာသာရပ်အဖြစ် လမ်းညွှန်ထားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေဟာ တချိန်မှာ နိုင်ငံကို ဦးဆောင်ကြရမယ့် လူငယ်စာသင်သားတွေအတွက် တကယ် လိုအပ်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၀နှစ်များရဲ့ အစောပိုင်းကာလတွေကတည်းက ဦးသန့်တင်ပြခဲ့တဲ့ အကြံပေးချက်တွေဟာ ခု နှစ်ပေါင်း၆၀ကျော်ခဲ့တဲ့အထိ မြန်မာပြည်မှာ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့် မရကြသေးတာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာလည်း အာဏာရှင်စနစ်ကြီးစိုးမှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနာဂတ်မှာ တရားမျှတပြီး တော်မှန်တဲ့၊ ယဉ်ကျေးတဲ့ အစိုးရကို ရရေး အတွက် ကျောင်းစာသင်ခန်းမှာ Civic Education ဘာသာရပ်ကို စနစ်တကျ သင်ကြားခွင့်ရရေးဟာ အရေးကြီးတဲ့ လိုအပ်ချက်တရပ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဦးသန့်ရဲ့ အကြံပြုဆောင်းပါးကတဆင့် ဆွေးနွေး တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by မေငြိမ်း at 7:51 PM No comments:
Posted by မေငြိမ်း at 6:24 PM No comments:
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ရဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်တွေကို သုံးပတ်ဆက်တိုက် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကတော့ မူလတန်းအဆင့် ပညာရေးထဲမှာ ပြဌာန်းသင့်တဲ့ သင်ရိုးတွေ သင်ခန်းစာတွေအကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီတပတ်တော့ အလယ်တန်းအဆင့်မှာ ပြဌာန်းသင့်တဲ့ သင်ရိုးတွေအကြောင်းကို ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါ့မယ်။
ဥပမာပြောပြရရင် သမိုင်းဘာသာရပ်ထဲက ပုဂံခေတ်အကြောင်းသင်တဲ့အခါ ကျန်စစ်သားမင်းရဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ရှေးရှုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ကို ပြောပြရင်း၊ အုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့ လူမျိုးစုချင်း ချစ်ကြည်ရေးကို အလေးထားရမယ်၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကို သွေးကွဲအောင် အုပ်ချုပ်ရင် မင်းကောင်း အစိုးရကောင်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြောပြလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီကနေ တဆက်တည်းပဲ ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ အဲလို မင်းဆိုးမျိုးကို ဖြုတ်ချခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်း ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြည်သူအလိုမတူရင် ကောင်းတာ လုပ်တာဆိုပေမဲ့လို့လည်း တိုင်းပြည်ပိုင် ရတနာဖြစ်တဲ့ ဆင်ဖြူတော်ကို လှူမိလို့ ပြည်သူအလိုကျ နယ်နှင်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဝေဿန္တရာမင်းအကြောင်းကိုပါ ဥပမာအဖြစ် ထည့်ပြောပြနိုင်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါကပဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ သဘောသဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နှီးနွယ် ပြောပြ သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ နောက်ကွယ်က သင်ရိုးကို သင်ကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုပဲ မသင်ရဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လည်း ကျောင်းသားတွေ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Hidden Curriculum အနေနဲ့ အများကြီး ထည့်ပြီး သင်ပေးသွား နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မေငြိမ်း at 7:42 AM No comments:
Miriam College – Prospect Burma Scholarships for Myanmar Citizens
In 2008 there will be two to four funded places for Myanmar women to study bachelors’ degrees at Miriam College in Manila in the Philippines. Applicants can choose to study on any one of the following subjects
BSc in Environmental Planning and Management or
BA International Studies (International Politics Stream)
BA International Studies (International Development Stream)
Miriam College, established in 1926, isapremier Filipino Catholic educational institution for students committed to the values of truth, justice, peace, environmental sustainability and gender equality. A holistic and technologically enhanced curriculum is offered at all levels. Miriam College accepts only female students at the undergraduate level. The academic programs develop both the learning and caring competencies of students as they are prepared to be leaders in whatever endeavor they want to pursue. Miriam College’s programs are enriched byawide range of national, regional and international linkages developed through academic courses and special centers.
Applicants must have passed one of the following:
At least two years ofauniversity degree from Myanmar
An international high school certificate such as IGCSE or GED
An international college admissions exam such as SAT
Applicants must have strong oral and written English language skills If you have completed an English language test (such as TOEFL, IELTS), attach the certificate to your application. If you have not completed one of these exams your English will be tested as part of the selection process.
Applicants must haveaminimum of two years’ experience working for peace or human development.
Applicants must be committed to return to their place of origin upon completion of their studies at Miriam College to continue their work for peace and development.
Applicants must complete the attached form and either post or email it with necessary documents to:
PO Box 8, Mae Ping Post Office, Chiang Mai, 50301, Thailand
The application deadline is May 15th 2008. Late applications will not be considered.
Applicants must submit the following documents with their application form
All previous academic transcripts. If these are not available,aletter should be attached explaining why not.
A copy of your passport if available.
Two reference letters which explain in detail why you areasuitable applicant for this program.
Other relevant documentation related to your work experience.
No support is available under this program for dependants.
The scholarship will cover only one round trip ticket from Myanmar to Manila. No support will be available for students to return to Myanmar in the middle of their degree programs.
The scholarship will also includeabasic monthly allowance for food and accommodation.
Students supported by this program will be expected to meet Miriam College requirements, which include studying onafull time basis, doing regular volunteer work and maintainingaminimum GPA of 3.
Successful applicants will be required to signagrant letter and to observe the conditions of the award. Ifastudent fails to observe the conditions, they will be liable to repay the money.
All eligible applications received by the deadline of May 15th will be considered by two committees of academics and development workers. All information in the application will be kept confidential. Short-listed applicants will be contacted by phone or email by the 1st of June for language testing. The results will be announced by the 30th of June. Visa processing will take place in Myanmar and Manila throughout July, August and September. Successful applicants will be expected to travel to the Philippines at the end of September to start the academic program at the beginning of October.
More information about Miriam College is available at www.mc.edu.ph
For more information about the scholarship program contact sss@burmaed.org
Please PRINT your email address CLEARLY
Tell us immediately if it changes →
University: Miriam College
PROSPECT BURMA/Miriam College
Scholarship Application form 2008
¨ Please answer ALL questions fully in English in black ink
¨ Completed forms must be mailed or emailed by 15th May 2008
¨ PLEASE READ THE GUIDANCE NOTES CAREFULLY
¨ DELETED We do not acknowledge receipt of applications, not do we send rejection notices (AS Thabyay will do this for Miriam applications)
Level of Degree studying for:
Course ends (month/year):
Funding requested (state amount and currency):
FOR OFFICE USE ONLY. Do NOT write anything below
New Student: Yes/No
Previous study report received:
Course enrolment confirmed:
Offer of Place:
References: Sent for Received Checked
Scholarship C’tee decision: Applicant shortlisted : Yes/No
Final decision: Reject □ Accept □ Amount granted:
Successful applicant notified:
Grant letter issued: Returned signed:
Funds transferred on:
(country code & number)
Details of passport or other travel document:
If either or both parents are retired or deceased, please give their previous occupation
Delete one of the following:
a) I have been accepted for the following university/college: Miriam College
b) I am continuing my studies at the following university/college:
Name of university /college:
Address of your university/college: Katipunan Rd., Loyola Heights, Quezon City
+632 435 9240
Are you currently enrolled inafirst degree (undergraduate) course?
If YES, attach documentation confirming that you are registered asastudent and includeatranscript of your most recent year of study.
Are you currently enrolled onapostgraduate degree course?
If YES, attach documentation confirming that you are registered asastudent.
Do you haveaconfirmed offer ofaplace onapostgraduate degree course?
If YES, attachacopy of the offer.
If you cannot attach all the required documents when sending the application, please explain the reasons inaletter, and send them as soon as you can.
Applications without all necessary supporting documents will be rejected.
You may attach further documents if you think they will help your application.
4. DETAILS OF YOUR COURSE:
Is the course? FULL TIME PART TIME CORRESPONDENCE
Expected finishing/graduating date: (Month/Year)
What is your main subject of study?
What is the title of your thesis? (If appropriate)
What qualification do you hope to receive from this course, eg BA, BSc? MA etc
a. Name & location of Secondary School attended:
b. Subjects studied:
Examinations passed with dates:
c. Details of College/University attendance:
d. Details of any formal English language tuition/examinations passed:
Names and addresses of people who can comment on your academic ability (one of these must be your current or most recent academic supervisor):
Attach at least one written academic reference.
If you fail to give the names of ACADEMIC referees, it will delay consideration of your application.
Names of friends, other students or relations ARE NOT ACCEPTABLE.
7. FINANCIAL QUESTIONS
a. EXPENDITURE: How much are your annual academic fees & living expenses? Make clear the currency used (US Dollars, Pounds sterling, Thai baht, Indian rupees etc)
Accommodation (9 months)
Food (9 months)
Other expenses Other living expenses, communication, airfare, and visa
b. INCOME: Sources of Financial Support for the academic year. Please indicate whether the amounts are assured, or if you have made an application:
Include applications to the Open Society Institute (OSI) or other funders.
Applied for? Or Certain?
Other scholarships/ grants/ fee waiver
Miriam College fee waiver
NET FUNDING REQUIRED (total expenditure minus total income) …………… Pesos
FAILURE TO DISCLOSE ALL OTHER FINANCIAL SUPPORT, GIVEN NOW OR AT A LATER DATE, WILL RESULT IN DISQUALIFICATION
c. Details of your bank account:
Name of Bank and branch address:
Name in which account is held:
Bank clearing code (if any)*:
We prefer that you have your own account, but if you useafriend’s account, be sure they agree.
*Ask your bank for the codes needed for bank transfers
Prospect Burma only offers partial awards; how will you cover the rest of your expenses?
Give details of your connection with, and dates of residence in Burma and in your present country of residence. Tell us also of your reasons for choosing your course of study. Continue onaseparate sheet of paper if necessary.
9. FUTURE PLANS (This section is very important)
We will give preference to candidates studying subjects relevant to the development of Burma. Please use this space to tell us in your own words about your future plans, and how you will benefit Burma. Continue onaseparate sheet of paper if necessary and sign it.
This section must be your own composition and handwritten
If we receive an identical answer from another applicant, both will be disqualified.
If you are awardedascholarship, we will ask you to sign an undertaking that that you firmly intend to return to Burma when feasible to help your country’s development.
If we have already awarded youagrant, we will not consider another application unless we have receivedareport from you.
- Miriam College Extension -
Please include any part time or voluntary work that you have done.
2. Additional Personal Information
1. What are the three characteristics/qualities others value in you asaperson?
2. How do you assess yourself asastudent?
3. How do you assess yourself asaperson?
4. What do you consider as your most outstanding achievement?
5. What characteristics/qualities do you value in person/s you admire?
6. What are your expectations about college life?
Essay. Applicants must haveaminimum of two years experience working for peace or human development. Describe what you have done to further peace and human development in your country. This section must be your own composition.
4. Community REFERENCES
Attach two recommendation letters from people who can comment on your community work experience. Include their details below. At least one reference should be fromacommunity leader who has experience with your work. Referees must not be members of your immediate family.
Posted by မေငြိမ်း at 2:32 AM No comments: